सत्यम होटल बनेपा जहाँ बिहानी खाजा निःशुल्क खान पाइन्छ - Always Tourism
बनेपा नेपालकै पुरानो शहरमा गनिन्छ । यातायात संचालन पूर्व हिडेर चिन देखी काठमाण्डौ प्रवेशको नाकाको रुपमा परिचित बनेपा धार्मिक तथा सास्ंकृतिक महत्वको प्राचिन शहर हो । काठमाण्डौको धुलो धुवाँबाट केही कम प्रभावित बनेपा मिनि काठमाण्डौ जस्तै छ । काठमाण्डौका अधिकांश सुविधा त्यहाँ पाइन्छ । काठमाण्डौबाट २६ किलोमिटर पूर्व दिशामा रहेको बनेपा पुग्न यातायातको सहज पहुँच छ । अहिले रिङरोड तथा कोटेश्वर हुदै ठूला सार्वजनिक साधन संचालन भएपछि काठमाण्डौसँगको यात्रा झन सहज भएको छ ।
बनेपामा पर्यटक स्तरीय होटलको अभावमा यहाँ आउने पर्यटकहरु धुलिखेलमै बस्नुपर्ने वा काठमाण्डौ फर्कनुपर्ने अवस्था थियो । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई अतिथी सत्कार गर्न एक वर्ष अघि बनेपा गोदामचोकमा सत्यम होटल संचालनमा आएको संचालक डा.भुषण श्रेष्ठले बताउनु भयो । सत्यम होटलमा हाल २२ वटा कोठाहरु पर्यटकको लागि उपलब्ध रहेको म्यानेजर साधुराम गिरीले बताउनु भयो । होटलमा १५० जना भन्दा बढि क्षमताको हल रहेको छ । त्यसैगरी ४० जना क्षमताको सानो हल पनि संचालनमा रहेको छ । स्थानिय कार्यक्रम देखी सभासमारोहलाई सो स्थान उपयुक्त रहेको संचालक डा. श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
पाहुनाको आग्रह अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने गरिएको छ । विशेषगरी नेपाली मौलिक नृत्य, धिमे नेवारी, तामाङ सेलो, शेर्पा, कौरा, मैथली, झुमा, पिकक तथा याक नृत्य देखाइने गरिएको छ ।
होटलमा सिंगल रुमको अठार सय, डबल रुमको चौविस सय र त्रिपल रुमको अठ्ठाइस सय तोकिएको छ । जुन पर्यटकिय अन्य होटलको तुलनामा सस्तो रहेको म्यानेजर गिरीले बताउनु भयो । पाहुनाहरुलाई बिहानी खाजा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको होटलले बताएको छ । अन्यत्र होटलमा बिहानी खाजाकाे लागि अतिरिक्त शुल्क लाग्ने गर्दछ । बनेपालाई गन्तव्य बनाउने पर्यटकको रोजाईमा हाेटल पर्दै गइरहेको संचालक डा. भुषण श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
वनेपाबाट नजिकै रहेको आसपासका डाडाँहरुमा हिड्डुल गर्दै प्रकृतिको रस्वादन गर्न सकिन्छ । हाइकिङको लागि गोसाईथान, रविओपी, लाकुरीभञ्याङ, फुल्चोकीडाडाँ तथा महाभारत पर्वत श्रृंखला उपयुक्त गन्तव्य हो । वनेपाबाट पनौती बजार हिडेरै एक घण्टामा पुग्न सकिन्छ । पनौति ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाले महत्वपूर्ण स्थल हो । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सुचिकृति हुन लागिरहेको पनौतिमा विभिन्न पर्वहरुमा मेला लाग्ने गर्दछ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार हुदै गइरहेको अवस्थामा वनेपामा अन्य होटल संचालन गर्न समेत आधार तयार भएको छ ।
होटल सत्यमको ठेगाना
गोदामचोक बनेपा ७ काभ्रे
फोन नं. ०११६६२६७९ र ९८५१०८१८३८
होटल सत्यमको तस्विरहरु